October 15, 2020 - Achawlaymyar
တခဏအတှငျးမှာ စိတျဖိစီးမှုလြော့ကစြမေယျ့ အထိရောကျဆုံးနညျးလမျးကောငျးလေးတှေ…
October 15, 2020 by Achawlaymyar
အလုပျခှငျမှာ ဖွဈစေ အိမျမှာနရေငျးဖွဈစေ စိတျဖိစီးမှုဆိုတာ ကွုံတှရေ့နိုငျပါတယျ။ အခြိနျနရောမရှေး ဝငျလာနိုငျတဲ့ စိတျဖိစီးမှုတှေ တားဆီးဖို့ဆိုတာ မလှယျကူပမေယျ့ စိတျဖိစီးမှုတှလြေော့ကြ သကျသာသှားအောငျတော့ သငျကိုယျတိုငျပွုလုပျလို့ရနိုငျပါတယျ။ ဒီတဈခေါကျပွောပွပေးမယျ့ အကွောငျးအရာကတော့ အခြိနျတိုအတှငျးမှာ စိတျဖိစီးမှုလြော့ကစြမေယျ့ အထိရောကျဆုံး နညျးလမျးကောငျးလေးတှပေါ (၁) လှုပျရှားမှုတဈစုံတဈရာပွုလုပျပါ စိတျဖိစီးမှုခံစားနရေခြိနျမှာ ခန်ဓာကိုယျကိုအနညျးငယျလှုပျရှားမှုပွုလုပျပေးရုံနဲ့ စိတျဖိစီးမှုတှအေတျောအသငျ့ လြော့ကသြှားစနေိုငျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ခဏတဖွုတျလမျးလြောကျထှကျလိုကျတာမြိုး နရောမှာတငျ ထိုငျထလကေ့ငျြ့ခနျးပွုလုပျတာမြိုးနဲ့ ခန်ဓာကိုယျကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လှုပျရှားမှုတဈခုခု လုပျဆောငျပေးလိုကျပါ။ စိတျဖိစီးမှုတှလြေော့ကသြှားတာကို ခံစားရပါလိမျ့မယျ။ (၂) တိတျဆိတျတဲ့နရောကိုသှားပါ (၃) အသကျရှုလကေ့ငျြ့ခနျးလုပျပါ အသကျရှုသှငျးရှုထုတျလုပျပေးရုံနဲ့ သငျလကျရှိခံစားနရေတဲ့ စိတျဖိစီးမှုဝဒေနာတှကေို မိနဈပိုငျးအတှငျးမှာတငျ လြော့ကစြနေိုငျပါတယျ။ လကေို နှာခေါငျးထိပျဖြားကနတေဆငျ့ ဝမျးဗိုကျအထိရောကျအောငျ ဖွညျးဖွညျးခငျြးအာရုံစိုကျပွီး ရှုသှငျးပါ။ထို့နောကျ ရှုသှငျးထားတဲ့လကေို ပါးစပျကနေ ဖွညျးဖွညျးခငျြးပွနျ ရှုထုတျပေးပါ။ တခဏအခြိနျအတှငျးမှာတငျ သိသိသာသာ … Read more
အပျိုတွေဖြစ်ရက်နဲ့ အိမ်ထောင်သည် ယောက်ျားကိုမှ စွဲလန်းကြရတဲ့ အကြောင်းရင်း (၅) ချက်
အပျိုတွေဖြစ်ရက်နဲ့ အိမ်ထောင်သည် ယောက်ျားကိုမှ စွဲလန်းကြရတဲ့ အကြောင်းရင်း (၅) ချက် ခုနောက်ပိုင်း အိမ်ထောင်ရေးပြဿနာ တော်တော်များများမှာ အပျိုလေးတွေက ဗီလိန်ဖြစ်နေတာကို အားလုံးလည်း တွေ့မြင်ရမှာပါ။ဘာကြောင့် အပျိုတစ်ယောက်က ရုပ်ရည်လည်း ရှိရက်သားနဲ့၊ ပညာအရည်အချင်းလေးလည်း ရှိရဲ့သားနဲ့ … အိမ်ထောင်သည် ယောက်ျားကိုမှ သိက္ခာအကျခံပြီး တွဲနေရလဲဆိုတာ အားလုံး သိချင်နေတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းလေးတွေရဲ့အဖြေကိုတော့ အောက်မှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ဖောက်ပြန်ချင်တဲ့ ယောက်ျားမှန်းသိနေလို့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ဟာ ယောက်ျားတစ်ယောက် ဖောက်ပြန်ချင်စိတ် ရှိနေတယ် ဆိုတာ အလိုလို သိကြပါတယ်။ သူတုိ့ဖက်က ချစ်နေရင်တောင် ဒီတစ်ယောက်ျား တစ်ယောက်က ဖောက်ပြန်မယ့်သူ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ရှေ့ဆက်တိုးလေ့ မရှိပါဘူး။ တကယ်လို့ အိမ်ထောင်သည် ‌ယောက်ျားတစ်ယောက်က ဖောက်ပြန်ခဲ့တယ် ဆိုရင်တော့ သူကိုယ်တိုင်က ဖောက်ပြန်ချင်တဲ့စိတ် … Read more
သှေးအမြိုး အစားကနေ ပွောပွနတေဲ့ သငျ့ရဲ့စိတျနေ သဘောထားတှကေ ဘာတှလေဲ ?
သွေးအမျိုး အစားကနေ ပြောပြနေတဲ့ သင့်ရဲ့စိတ် သဘောထားက ဘာတွေလဲ ဝင်ကြည့်လိုက် “လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေ” ဆိုတဲ့ ရှေးလူကြီးတွေရဲ့ ဆိုရိုးစကားအတိုင်း ဒီကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ ရှိတဲ့လူတွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စိတ်နေသဘောထားတွေ တူနိုင်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။သို့ပေမယ့် တူညီတဲ့အချက်တစ်ချို့ကို ဘုံထုတ်ပြီး သွေးအမျိုးအစားအလိုက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားတဲ့ စစ်တမ်းတစ်ရပ်ကို စာဖတ်ပရိသတ်တွေ သိရှိနိုင်ဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ “A” သွေး ပိုင်ရှင်များ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ လူဦးရေ လေးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်က “A”သွေးပိုင်ရှင်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသွေး အမျိုးအစားပိုင်ရှင်တွေဟာ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်အောင် တွေးခေါ်ပေးတတ်ပြီး နားလည်ပေးနိုင်စွမ်းရှိသူတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် အသင်းအဖွဲ့နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရာမှာလည်း အေးအေးဆေးဆေး တည်ငြိမ်လေ့ရှိသူတွေပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ ဘဝကို ကိုယ့်ဘာသာ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်တည်ဆောက်လေ့ရှိပြီး စိတ်ခံစားမှုတွေကို ဦးစားပေးတတ်သူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ရင်ထဲက စိတ်ခံစားမှုတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိပေမယ့် … Read more
အစပျ ပုံမှနျစားပေးခွငျးကွောငျ့ ရရှိနိုငျမယျ့ ကနျြးမာရေး အကြိုးကြေးဇူးမြား…….
အစပ် ပုံမှန်စားပေးခြင်းကြောင့် ရရှိနိုင်မယ့် ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ အစပ်လေးပါကာမှ ထမင်းစားဝင်တတ်တဲ့လူတွေ ရှိကြလားမသိဘူး။ တကယ်တော့ အစပ်စားခြင်းဟာ အစာအိမ်အတွက် မကောင်းဘူးဆိုပေမယ့်လို့ ပုံမှန်လေးစားပေးခြင်းအားဖြင့် လူတိုင်းမထင်ထားတဲ့ ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးတွေရှိနေတယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား။ မသိသေးဘူးဆိုရင်တော့ ဒီစာလေးကို ဆက်ဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ (1) အသက်ရှည်စေတယ် Harvard and China National Center for Disease Control and PreventionTrusted Source ရဲ့ လေ့လာချက်အရ တစ်ပတ်ကို ၆ ရက်လောက် အစပ်ပါတာ စားပေးခြင်းဟာ မစားတဲ့လူတွေထက် အသက်ရှည်မှုနှုန်းဟာ ၁၄% လောက်ပိုမြင့်နေပါတယ်လို့ Health Line မှာ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ (2) Metabolism ကို မြှင့်တင်ပေးတယ် အစပ်နဲ့ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေဟာ သင့်ရဲ့ metabolism … Read more
မျက်နှာ ပြောင်တဲ့ ချစ်သူ မိန်းခလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ကောင်လေးတွေရဲ့ အားသာချက် (5) ချက် သင့်ချစ်သူ ကောင်မလေးဟာ အမြဲတမ်း ရယ်စရာ ဟာသတွေ ပြောပြီးမျက်နှာပြောင် တတ်သူတစ်ယောက်ဟုတ်တယ် ဆိုရင်တော့သင်ဟာ ကံအကောင်းဆုံး လူသားတစ်ယောက်ပါ။ ယောင်္ကျားလေးဆန်ပြီး ဟာသဉာဏ် ထူးကဲတဲ့ ကောင်မလေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ချစ်သူ အပေါ်မှာယုံကြည်စိတ် အပြည့်အ၀ရှိတဲ့အပြင် ဘဝခရီးတစ်ခုလုံးကိုပါ သင်နှင့်အတူ ဖြတ်သန်းဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသား ဖြစ်ကြ ပါတယ် ။ဒါကြောင့်ဒီလို ကောင်မလေး တွေကိုပိုင်ဆိုင် ထားခွင့်ရတဲ့ ဘော်ဒါတို့အတွက် ဘယ်အချက်တွေဟာ ကံကောင်းစေလဲ ဆိုတာဖော်ပြ လိုက်ရပါတယ် ။ ဉာဏ်ကောင်း တတ်ကြတယ် ဒီလို ကောင်မလေးတွေဟာ သာမန်ထက် ထက်မြက်ထူး ကဲတဲ့ဉာဏ်ရည် ဉာဏ်သွေးကိုပိုင်ဆိုင်တတ် ကြပါတယ် ။ သူတို့ဟာပတ်ဝန်းကျင် … Read more
ချစ်သူရဲ့ဆံနွယ်အရှည်တွေဟာ ကိုကိုပုရိသတို့အတွက်တော့ စိတ်ကူးယဉ်ပန်းခင်းကြီးပါပဲ ချစ်သူရဲ့ဆံနွယ်အရှည်တွေဟာ အမျိုးသားတွေအတွက်တော့ လဲလျောင်းချင်စရာ နူးညံ့လွန်းတဲ့ ကတ္တီပါကောဇောတစ်ခုပါပဲ။ ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ဆံနွယ်ရှည်တွေကို ကိုကိုတို့ဟာ ကာယကံရှင် တွေထက် တောင် ပိုပြီးသည်းသည်းလှုပ်တတ်ကြပါသေးတယ်။ ဆံပင်ဆိုတာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဒုတိယမျက်နှာပြင်ပါ လှပလွန်း တဲ့ ကေသာတွေဟာ အမျိုးသားတွေရဲ့အချစ်ကို ဆွဲဆောင်ဖို့ 80% လုံလောက်ပါတယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်ထက်ကိုယ့်ရဲ့ဆံပင်ကိုပိုပြီး ချစ်နေတယ် ဆိုရင် ပျိုမေတို့အနေနဲ့ စိတ်မဆိုးပါနဲ့။ ဒါဟာပျိုမေတို့ကိုချစ်လို့ ပျိုမေတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းလေးတွေအကုန်လုံးကို ချစ်တဲ့သဘောပါပဲ။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ ချစ်စရာ အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းလေးကို ကိုကိုတို့အနေနဲ့ တန်ဖိုး ထားမြတ်နိုးတယ်ဆိုတာ သဘာဝပါပဲ။ ကိုယ့်ချစ်သူလေးကို တန်ဖိုးထားတဲ့ အပြင် သူ့ရဲ့ဆံနွယ်တွေကိုပါ ဂရုစိုက်ဖို့ဆိုတာ တော်ရုံမြတ်နိုးမှုနဲ့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဆံပင်တွေကိုတန်ဖိုးထား တဲ့ ကိုကိုတွေကိုပိုချစ်ပါ။ လှပလွန်းတဲ့ဆံနွယ်ရှည်တွေဟာ ကိုကိုပုရိသတို့ရဲ့ စိတ်ကူးယဉ် ပန်းခင်းကြီးပါပဲ။ … Read more
ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ ဆန္ဒပြခံရတဲ့ Project K ဘက်က ရပ်တည်လိုက်တဲ့ မောင်မောင်အေး
ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ ဆန္ဒပြခံရတဲ့ Project K ဘက်က ရပ်တည်လိုက်တဲ့ မောင်မောင်အေး Asia Song Festival 2020 မှာ ပါဝင်ဖျော်ဖြေခဲ့ပြီး အောက်တိုဘာ ၁၃ရက်နေ့က ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ Project K အဖွဲ့ကို လေဆိပ်နားမှာ ဆန္ဒလာပြခဲ့ကြပါတယ်။ Project K အဖွဲ့ ဟာ ဖျော်ဖြေစဉ်မှာ ရွှေတိဂုံစေတီပုံရိပ်ကို နင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် မကျေနပ်ကြတဲ့အတွက် အခုလိုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး မောင်မောင်အေးက Project K ဘက်က ရပ်တည်ပြီး အခုလိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားသူခိုး ထောင်ထွက် ကြေးစားလူသတ်ကောင် ကိုကျတော့ လွတ်မြောက်ပါစေကြောင်း ဘုရားမှာ ဆုတောင်းပေးရတာနဲ့….ကယ်တင်ရှင်သူရဲကောင်းအဖြစ် ငါတို့သည်ကြည်လင်းများသာ ဆိုတဲ့ပရိုဖိုင်းတွေချိန်းကြရတာနဲ့….သူ့ပုံပါတဲ့အင်္ကျီတောင်ရိုက်ပြီး ဝတ်လိုက်ကြသေးတာနော်။ ဘုရားပေါင်းများစွာကိုလက်ချိုးပူဇော်ထားခဲ့ကြတော့လည်း သားတို့ သမီးတို့အဲ့နေ့က ကျောင်းမတက်တဲ့ရုပ်တွေနဲ့။ ရွှေဝါရောင်အရေးအခင်းမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေထဲအထိဝင်ပြီး နံပါတ်တုတ်ဆွမ်းကပ်ခဲ့ကြတာတို့… လယ်တီသိမ် … Read more